Android အတွက် File Manager File Explorer APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို APK ကို
ဖိုင်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုရယူသုံး, ဖိုင်လွှဲပြောင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့တစ်ဦးကအပြည့်အဝပေးထားသော file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူနဲ့ app မန်နေဂျာ: Manager ကို File!
ထုံးစံအဆင်းအရောင်နှင့် Now ကိုရရှိနိုင်ပါ! ကို Select လုပ်ပါနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုသုံးပါ။
★ Cloud သိုလှောင်မှု
Access ကို Google Drive ကို & Google ကသိုလှောင် Dropbox, One ကို Drive ကို, အမေဇုံ Drive ကို, နှင့် Facebook အမှတ်တရများ
★ ဖုန်းနံပါတ် Manager ကို
အကြောင်းအရာလွှဲပြောင်း, မိတ္တူ / ငါးပိ, ချုံ့, ဇီပ်, ဖျက်ခြင်းနှင့်ဖိုင်များရွှေ့အဖြစ်ဒေသခံ drive ကိုပြင်ပသိုလှောင်မှုနဲ့ cloud storage ကိုအကြား, ZIP ဖိုင်, RAR, BIN, TAR & APK ကိုဖိုင်တွေမဖြည်
Access ကိုဖိုင်များ, သိုလှောင်မှု backup လုပ်ထားနဲ့ USB Flash ကို Drive ကိုမန်နေဂျာ
★ audio Manager ကို
.mp3 ဖိုင်တွေ & ဖုန်းမြည်သံမန်နေဂျာများအတွက် file manager
★ App ကို Manager က
app များကိုဖျက်ပစ်ပါ & စီမံခန့်ခွဲ app ကိုသိုလှောင်မှု
▶ဖုန်းစီမံခန့်ခွဲမှု & FILE ကို Viewer
* Access ကို Files & သိုလှောင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲ:
, downloads, access copy နဲ့ paste ဖိုင်များ, ဖိုင်များ, လွှဲပြောင်းဖိုင်များ, backup ဖိုင်တွေ, ပြပွဲက hidden file တွေကို delete, ဖိုင်တွေချုံ့ဖိုင်တွင်စူးစမ်းရှာဖွေသူ။
* သိုလှောင် Manager က:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ disk ကိုသန့်စင်နှင့်အတူဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်အာကာသ Save နှင့် compressed files တွေကိုဖြည်သို့မဟုတ် ZIP ဖိုင်ထဲမှာချုံ့ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း, RAR, APK ကို, TAR, BIN, နှင့် TBZ ကို formats ။ File Manager ကိုသွားလာရင်း (OTG) အပေါ်နှင့်အတူ usb flash drive ကို (သော microSD) ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်း, ဖိုင်တွေ, ရှယ်ယာဖိုင်များနှင့်လွှဲပြောင်းဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ပါမည်။
* File ကိုမန်နေဂျာနှင့် Cloud သိုလှောင်မှုများအတွက် Viewer ကို File:
Google Drive ကို Dropbox, One ကို Drive ကို (Skydrive ကို), အမေဇုံ Drive ကို (အမေဇုံတိမ်တိုက်, Amazon Cloud Player လို), Facebook မှအမှတ်တရများ (မိုဃ်းတိမ်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ) လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဖျက်ပစ်ပါမည်။
▶ ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်အတွက် file manager - ANDROID လွှဲပြောင်း
* အဆိုပါ Go ကိုထောက်ပံ့တွင် File Transfer &:
သော microSD အပေါ် Access ကိုဖိုင်များ, ကြီးမားတဲ့ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထားဖိုင်တစ်ဖိုင်, ဖိုလ်ဒါကို, ဒါမှမဟုတ် usb flash drive ကိုအပေါ် directory ကိုဖြည့်စွက်။ ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို internal storage ကို, usb flash drive ကို, နဲ့ cloud storage ကိုအကြားအကြောင်းအရာလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။
နားထောင်ပါနှင့်သင့် mp3 ဖိုင်များ, ဂီတ & ဖုန်းမြည်သံဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုအပေါ်စီမံခန့်ခွဲ။
▶ APP ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု & သိုလှောင် Cleaner
* Apps ကပ & Clean သိုလှောင်မှုကိုဖျက်မည်:
App ကို Manager ကိုအသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, app များကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်သိုလှောင်မှုသန့်စင်နှင့်အတူ disk ကိုသိုလှောတက်လွတ်မြောက်နှင့် app ကိုအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်။
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုအဘို့အကြံပြု Apps ကပ
* PDF ကို Viewer ကို: http://bit.ly/pdfviewermaple
Root Access ကိုများအတွက်:
* Root စစ်ဆေးမှု: http://bit.ly/rootcheckjrummy
* Root Browser ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို: http://bit.ly/rootbrowser
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုသုံးပြီးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! မေးခွန်းများကို, တုံ့ပြန်ချက်, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါသလား? contact@maplemedia.io မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး။
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုများအတွက်အသစ် update ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီဗားရှင်းလည်းပါဝင်သည်:
- နှိပ်ခြင်းနှင့်အချို့ဖိုင်တွေအပေါ်ကိုင်ပြီး app ကို crash မယ်လို့ဘယ်မှာပြဿနာ Fixed
- အပေါင်း (+) သင်္ကေတကိုမရှိတော့အသစ်တစ်ခု folder ကိုဖန်တီးပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပျောက်
- တိုးတက်လာသောအန်းဒရွိုက် 8.0 လိုက်ဖက်တဲ့နဲ့ app optimization အခြားသေးငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာ updates များကို
မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်သည်ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို📂သုံးပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, contact@maplemedia.io မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။
21.28 ကို MB